सुनको भाउ घट्यो, कतीमा हुदै छ कारोवार ? – ramechhapkhabar.com
सुनको भाउ घट्यो, कतीमा हुदै छ कारोवार ?
मंगलबार सुनको भाउ प्रतितोला ५ सय रुपैयाँ घटेको छ । नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९५ हजार १ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यसैगरी, तेजावी सुनको मूल्य तोलाको ९४ हजार ६ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ ।
चाँदीको भाउ प्रतितोला १२ सय २५ रुपैयाँ कायम भएको छ । यसअघि सोमबार छापावाल सुनको भाउ तोलाको ९५ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यसैगरी, तेजावी सुनको मूल्य तोलाको ९५ हजार १ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रका लागि यस्तो छ ह्वावेको ‘ह्वाइट पेपर’
काठमाडौं । ह्वावे कनेक्ट २०२० मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय डेटा कर्पोरेशन (आईडीसी) सँगको सहकार्यमा ह्वावेले ‘बैंकिङ इन्डस्ट्री राइजेज टु न्यु नर्मल’ शीर्षकको ह्वाइट पेपर जारी गरेको छ ।
कोभिड १९ ले बैंकिङ क्षेत्रमा पारेको प्रभावको अध्ययन गर्दै दुई संस्थाले यो प्रतिवेदन तयार पारेका हुन् । प्रतिवेदनमा आगामी दिनमा बैंकिङ क्षेत्रले चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा समेत उल्लेख गरिएको छ ।
यस प्रतिवेदनमा ‘बैंकिङ रिसिलियन्स सूचक’ तयार परिएको छ, जसले बैंकिङ क्षेत्रको वर्तमान स्थितिलाई क्षेत्रको हिसाबले ६ प्रमुख उपायका आधारमा मापन गरेको छ ।
यो सूचक क्षेत्रीय रुपमा देखिएका भिन्नतालाई प्रस्तुत गरेको छ, जसमार्फत बैंकहरुले आफ्नो स्थिरताको आँकलन गरी भविष्यमा चाल्नुपर्ने कदमको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
ह्वावे कनेक्ट २०२० मा ह्वावे र यसका पार्टनरहरूले वित्तीय क्लाउड, स्मार्ट शाखा, डिजिटल कोर र इन्टेलिजेन्ट डाटा प्ल्याटफर्म सहित एफएसआईसँग सम्बन्धित विभिन्न उपाय प्रस्तुत गरेकाे छ ।
उक्त उपायमार्फत बैंकहरूलाई लागत घटाउन, एफएसआई छरितो गर्न, ग्राहकलाई आकर्षित गरेर राख्न र बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन मद्धत गर्नेछ ।
कोभिडका कारण दैनिक जीवनमा मोबाइलमा वित्तीय सेवाको ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।
चीनमा प्रारम्भिक अनुभवको आधारमा ह्वावे विश्वव्यापी रूपमा मोबाइल अन्तर्क्रियामा जाने कदमलाई समर्थन गर्ने संस्थाको रुपमा अघि रहेको छ ।
यस्तोमा ह्वावेले जारी गरेको ह्वाइट पेपरमार्फत नेपालका बैंकिङ क्षेत्रले पनि लाभ लिन सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त रिपोर्टका अनुसार कोभिड १९ का कारण बैंकको ब्यालेन्स शीट असर परेको, मोबाइल उपकरणबाट डिजिटल भुक्तानीमा आक्रामक वृद्धि र बैंकिङ सेवामा शाखाको भूमिका खस्कँदै गएको छ ।
यस्तोमा च्यानल अपग्रेड गरी पूर्ण डिजिटलमा आधारित ग्राहक सेवाको आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै ग्राहकलाई दिने सेवामा परिवर्तन गर्नुपर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा हाइब्रिड क्लाउड र माइक्रोसर्भिसेस को निर्माण गर्नु पर्ने लगायतको सुझाव प्रतिवेदनले दिएको छ ।
साथै डेटा र एनालिटिक्सलाई परिमार्जन गरी मजबूत डेटा लेक र एआईमा आधारित सिस्टमको निर्माण गर्नुपर्ने, कामलाई कागज र पीसीएसबाट मोबाइलमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै पछिल्लो कनेक्टिभिटी फाइभजी, एआई, आईओटीको प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।